Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogaadeniya Ee Wadanka Norway oo Kulan Balaadhan Qabatay.
Jaaliyada Ogaadeniya Ee Wadanka Norway oo Kulan Balaadhan Qabatay.
Posted by Wariye Qaran	/ December 31, 2017
Waxaa maanta kulan balaadhan qabtay jaaliyada Ogaadeniya ee wadanka Norway shirkan oo ah mid sanadkiiba mar la qabto waxaana lagu qabtay magaalada Oslo ee caasimada wadanka Norway, kulan kan ayaa waxaa kasoo qayb galay xubnaha Jaaliyada Ogaadeniya, taageerayaasha halganka Ogaadeniya iyo Marti sharaf soomaliyeed oo aad u badan kuwaasoo lagu casuumay shirkii maanta ahaa.
Kulan kan maanta ayaa waxaa looga hadlay arimo fara badan kuwaasi quseeya halganka Ogaadeniya iyo guud ahaanba siyaasada guud ee geeska afrika shirka ayaa waxaa inta badan diirada lagu saarayay sidii soomaalida looga dhaadhicin lahaa kaalinta halganka Ogaadeniya iyo doorka umada soomaaliyeed iyo in looga fadhiyo inay hiil iyo hooba la garab istaagaan shacabka Soomaalida Ogaadeniya ee halganka gobonimo doonka ah kula jira gumaysiga Itoobiya.
Shirka ayaa waxaa laga jeediyay qudbado kala duwan kuwaasi diirada lagu saarayay xaqnimada Halganka Ogaadeniya iyo sidoo kale heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray halganka ay xaqooda ku doonayaan shacabka Soomaalida Ogaadeniya.
Shirka ayaa gabagabadii wuxuu kusoo dhamaaday si guul ah waxaana dhamaan dadwaynihii kasoo qayb galay ay hoosta ka xariiqeen inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin halganka xaqa ah ee soomaalida Ogaadeniya.